Nomad Base Station Hub. Ngoku iyahambelana nokutshaja kweMagSafe | Ndisuka kuMac
UNomad usungula isiseko esitsha nesiphuculweyo sokutshaja se-iPhone 12, i-iPhone 13 kunye ne-AirPods, ekulula ngayo ukulungelelanisa izixhobo ukuze zihlawule. UNomad yenye yeefemu ebesisebenzisana nazo iminyaka kwaye inyani yile umgangatho weemveliso zayo kunye nezincedisi ziyamangala xa sele sinazo esandleni. Kule meko, ngesiseko esitsha sokutshaja, esibonakala sifana kakhulu nemodeli yangaphambili, sinokuthi umgangatho wezinto ezisetyenziswayo ngokwenene uphezulu kakhulu.
Siqinisekile ukuba xa uqala ukusebenzisa nayiphi na imveliso yabo uya kuyiqonda ngokwenene into esiyithethayo kwaye kukuba kunye noNomad awuyi kuba neengxaki zaluphi na uhlobo, akukho kungasebenzi kakuhle kwiitshaja zakho okanye ukuphulwa kwemitya yakho. Yonke into abayenzayo inokuba nelogo ye-Apple eprintwe kuyo, yenye yeefemu ezininzi ezaziwayo ngabasebenzisi Apple kwaye siyayiqonda into yezinye izixhobo ezininzi kuba zinezixhobo zolunye uhlobo kwikhathalogu yewebhu yeemveliso.
1 Yintoni ekwibhokisi yesi siseko sokutshaja uNomad
2 Isiseko seSikhululo seHub yokuTjaya Amandla
3 Izinto zokwakha zesiseko sokutshaja
Yintoni ekwibhokisi yesi siseko sokutshaja uNomad
Kwibhokisi sifumana yonke into oyifunayo ukuze ukwazi ukusebenzisa isiseko sokutshaja ngaphandle kokuthenga ezinye izixhobo. Kule meko intambo yombane elungileyo yongezwa ngokwemiqathango yokuchasana, yenziwe ngenayiloni kunye nobude obungaphezulu kokwaneleyo kuye nawuphi na umsebenzisi ongaphezulu nje kwemitha enye. Ukongeza, iiadaptha zongezwa kwikhonkco eludongeni kwaye lisebenza naphi na emhlabeni, ngoko sinokuthatha isiseko sokutshaja naphi na.
Njengoko sihlala sisitsho ukuba ukupakishwa kwesi siseko sitsha sokutshaja esaphehlelelwa yifemu yaseCalifornian igqwesile kwaye yongeza yonke into oyifunayo ukutshaja izixhobo zakho kanye ngaphandle kwebhokisi kwaye udibanise eludongeni.
Isiseko seSikhululo seHub yokuTjaya Amandla
Kule meko sinokuthi i Ubukhulu bomthwalo yi-10W kwinxalenye yayo ye-MagSafe, yongeza i-18W USB C port kunye ne-7,5W USB A port. Ngala magunya okutshaja, abasebenzisi baya kukwazi ukuhlawula izixhobo zabo ngeendlela ezahlukeneyo kwaye akuyimfuneko ukushiya isixhobo kwisiseko sokuyihlawulisa, inokudityaniswa ngokuthe ngqo kwikhebula nangona ngokuqinisekileyo kuya kulahlekelwa lubabalo lonke.
Kufuneka sikhumbule ukuba iziseko zokutshaja ezingenazingcingo zolu hlobo azikwazi okanye kufuneka zibe shushu kakhulu, ngoko ke ayifaki lonke ukhuseleko oluyimfuneko ukuze oku kungenzeki. IPhone yethu iya kutshaja ngokukhuselekileyo kwesi siseko seNomad, ngoko akukho mfuneko yakukhathazeka.
Izinto zokwakha zesiseko sokutshaja
Njengoko sixoxe kancinci apha ngasentla, izinto ezisetyenziselwa ukwenza esi siseko sokutshaja zikumgangatho ophezulu, uyongeza Isikhumba sokwenziwa kwesiseko kwaye ke sikhusele i-iPhone yethu ngelixa sitshaja nokuba ayinxibanga tyala kunye ne-aluminium yenxalenye yesiseko. Kuya kufuneka sitsho ukuba amatyala anenkxaso ye-MagSafe ahambelana ngokupheleleyo nesi siseko sokutshaja, awuyi kuba neengxaki ngayo.
Kwindawo engezantsi, ezinye iibhendi zerabha zongezwa ukuze zingatyibiliki xa sinazo etafileni kwaye zikwabandakanya i-LED eguquguqukayo ehlengahlengisa ngokuhambelana nokukhanya okujikeleze, iphazamise kancinci xa ikwindawo ezimnyama. Uyilo luyafana nemodeli yangaphambili kodwa Ngaphakathi, yongeza iimagnethi zolungelelwaniso olugqibeleleyo xa utshaja iPhone yethu okanye AirPods.
Ngokubanzi, esi siseko ilungele ukutshaja ii-iPhone zethu okanye ii-AirPods enkosi kwiikhoyili ezintathu ukuba yongeza ngaphakathi. Ukongeza, umthwalo ngoku uhlengahlengiswa ngokuthe ngqo kwizixhobo ezineMagSafe enkosi kwimagnethi ngaphakathi. Ngale ngqiqo, asikuko ukuba izixhobo zincanyathiselwe ngokoqobo kodwa zilayishwa ngendlela elula xa zibekwe kuyo. Singasebenzisa isiseko ngeendlela ezininzi okanye izikhundla kwaye ivumela i-iPhone ukuba ibekwe ngokuthe tye okanye ngokuthe nkqo kuyo, iya kuhlawulisa ngokukhuselekileyo.
Ixabiso le-Nomad base kunye nokulungelelaniswa kwamagnetic isuka I-119,99 yee-euro kwiwebhusayithi yeMacnificos.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » Nomad Base Station Hub. Ngoku iyahambelana nokutshaja kweMagSafe